युगसम्बाद साप्ताहिक - न वाइडबडी न एनलेस मात्र ज्ञानेन्द्र शाही - यादब देवकोटा
Thursday, 04.09.2020, 11:55am (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 09.25.2019, 03:45pm (GMT+5.5)
पछिल्लो समय केही व्यक्तिका पछाडि राज्य र त्यसका संचालकका भातृ संगठनहरु लागिरहेका छन् । यो राज्यको कमजोरी वा राज्यलाई निरीह देखाउने उपक्रम मात्र हो । नेकपाको भातृ संगठन युवा संघले देखाएको चरित्रमुलुक कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने संकेत समेत दिएको छ ।
गत सोमबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध हुने अराजक र प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिप्रति सजग रहँदै त्यसको प्रतिकार गर्न युवा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले परिवर्तनलाई रक्षा गर्दै समाजवादोन्मुख यात्रामा अघि बढ्ने संकल्प गर्न आवश्यक भएको र अराजकतावादी विरुद्ध सजग रही प्रतिकार गर्न आग्रह गर्नभएपछि त्यसको केही दिन अघि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमान कुराएको भन्दै बिरोध गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नेकपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रतिकारमा उत्रने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जिल्ला प्रवेश निषेध गरेको घोषणा ग¥यो । प्रचण्डको निर्देशनपछि नेकपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रतिकार सुरु गरेको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको घोषणा गरेको हो । युवा संघ कास्कीले जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाएको घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि धनुषाले पनि गणतन्त्रबिरोधी अराजकताका नाइके भन्दै शाहीलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गरेको छ ।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, कास्की र धनुषाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जिल्लामा आउन प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको हो । “हजारौं जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकविरूद्ध अभियान चलाउने ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही)लाई प्रवेश निषेध गरिएको छ” । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, कास्की र धनुषाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
युवाहरु सिर्जनशील भए मात्र देश बन्छ । खै युवासंघले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको प्रतिकार गरेको ? खै प्रचण्डले त्यस्तालाई ठेगान लगाउन आव्हान गरेको ? सत्ता जोगाउने र सत्तामाथि धारेहात लगाउनेहरुलाई प्रतिकार गरेर गणतन्त्र जोगिन्छ भन्नु राणाकालीन सोच बाहेक केही हैन ।
युवासंघले काठमाडौंका सडकहरु बेहाल बनाउने ठेकेदारको प्रतिकार गरेका भए सारा जनता उनीहरुसंगै सडकमा जान्थे । मालपोत, यातायातमा घूसखोरी बिरुद्ध अभियान चलाएका भए त्यहाँ पनि जनताले साथ दिन्थे । कालोबजारी, मिसावट बिरुद्ध युवा परिचालन गरेका भए सिंगो देशले साथ दिन्थ्यो । हो, उनीहरु भन्छन् यो काम राज्यको हो र कानुन अनुसार हुनुपर्छ । त्यसो भए ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने अधिकार कुन कानुनले दियो । आज ज्ञानेन्द्र शाही, भोलि शेरबहादुर, पर्सी बाबुराम भट्टराई? जो जो सरकारका बिरुद्धमा बोल्छन् ती सबको प्रतिकार गर्दै हिंड्ने हो युवा संघले ?
र, अर्को प्रश्न– शाहीलाई जिल्ला प्रवशेमा रोक लगाउने युवासंघ को हो ? यो आजकता मच्चाउने र बिरोधी निमिट्यान्न पार्ने खेल बाहेक केही हैन । युवासंघ जस्तो सशक्त संगठनलाई एउटा व्यक्तिको प्रतिकार गर्न कति सुहाउँछ । यसले ज्ञानेन्द्र शाहीको उचाई कति बढाउँछ र युवासंघको कति भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर शाहीले कानुन विपरीत काम गरेका भए कानुनले काम गर्छ । कसैलाई जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाउने अधिकार युवासंघलाई कसले दियो ?